Buun Buunintii Jamaahiirta Real Madrid Ee Koobka Champions League & Hoos U Dhigii Koobka La Liga Oo Uu Zinedine Zidane Si Layaableh Meesha Uga Saaray Iyo Sport Oo Markiiba Tooska Ku Ifiyay. – GOOL24.NET
Buun Buunintii Jamaahiirta Real Madrid Ee Koobka Champions League & Hoos U Dhigii Koobka La Liga Oo Uu Zinedine Zidane Si Layaableh Meesha Uga Saaray Iyo Sport Oo Markiiba Tooska Ku Ifiyay.
Dhawaan ayay ahayd markii uu wargayska markii uu wargayska Marca ee magaalada Marca ka soo baxaa uu soo bandhigay in kooxaha saddexda ah ee Spain ugu waa wayni ay koobab ku soo wada guulaysteen xili ciyaareedkan, Real Madrid oo koobka Champions League ku guulaystay, Barcelona oo La Liga iyo Copa Del Rey ku guulaysatay iyo Atletico Madrid oo koobka Europa League soo qaaday.
Waxayan markaas dadwaynaha shabakeeda ku xidhan u soo bandhigtay in ay kala doortaan saddexdan kooxood mid xili ciyaareedka ugu fiican soo qaadatay, waxayna markaas jamaahiirta Real Madrid si cad u sheegeen in ku guulaysiga koobka Champions League uu ka muhiimsan yahay isku darka La Liga iyo Copa Del Rey.
Laakiin wargayska Sport oo isna ka soo baxa magaalada Barcelona ayaa baran bagaado iyo buun buun ku tilmaamay in jamaahiirta Real Madrid ay u doorteen in koobka Champions League uu ka fiican yahay isku darka Copa Del Rey iyo La Liga.
Haddaba wargayska Sport ayaa hadda daabaacay warbixin uu daliil uga dhigtay in Zinedine Zidane uu burburiyay daacayadii ay faafiyeen jamaahiirta kooxdiisu ee ahaa in Champions League uu ka fiican yahay labada koob ee La Liga iyaga oo soo qaatay hadal uu maanta ka sheegay goobtii uu shaqo ka tagistiisa Madrid ugu shaacinayay.
Zinedine Zidane ayaa la waydiiyay in uu sheego waqtigiisii ugu fiicnaa ee Real Madrid iyo waqtigiisii ugu xumaa, waxaana la yaab noqotay in waqtigiisii ugu fiicnaa ee Real Madrid uu ku tilmaamay markii uu koobka La Liga kula guulaystay kooxdiisa Madrid inkasta oo uu saddex koob oo Champions League ah la soo qaaday.
Zinedine Zidane oo ka jawaabayay waqtigii ugu fiicnaa ee xusuusta gaarka ah ku lahaa waayihiisii tababaranimo ee Real Madrid ayaa ku jawaabay: “Waxaa jira waxyaabo badan, sida Champions League, laakiin haddii uu mid jiri lahaa ka tababare ahaan waa ku guulaysiga La Liga. Waxa uu ahaa waqtigii ugu fiicnaa, waxa uu ka mid ahaa waqtiyadaydii ugu quruxda badnaa ee Real Madrid”.
Hadalka Zidane ayuu wargayska Sport u adeegsaday in uu dib ugu gano jamaahiirta Real Madrid ee koobka Champions League u arkayay in uu ka sareeyo labada koob ee ay Barcelona ku soo guulaystay ee La Liga iyo Copa Del Rey maadaama oo uu Zidane qiray in waqtigiisii ugu fiicnaa, ugu quruxda badnaa uu ahaa ku guulaysigii La Liga.
Dhinaca kale Zidane ayaa mar uu ka jawaabayay waqtigiisii ugu xumaa ee Real Madrid ku soo maray waxa uu cadeeyay in ay ahayd markii ay kooxdiisu Bernabeu kaga hadhay Copa del Rey ee kulankii lugtii labaad ee ay Leganes la ciyaareen.
Zinedine Zidane oo ka jawaabaya waqtigii Madrid ugu xumaa ee soo maray in uu ahaa kulankii Leganes ee ay Copa Del Rey uga hadheen ayaa yidhi: “Kaas ayaa ahaa waqtigii ugu xumaa, waanan xusuustaa, anigu isaga kama hadli karo”.
Si kastaba ha ahaatee, hamaahiirta kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa mid walba waxa uu ku faraxsan yahay koobabka ay kooxahoodu ku dhamaysteen xili ciyaareedkan.